> Resource> Mac> otú nyefee faịlụ site iPod ka Mac
Nwere nza nke faịlụ gụnyere music, video na foto gị iPod, na chọrọ nyefee gị Mac? N'ụzọ dị mwute, Apple ụlọ ọrụ nanị na-ahapụ gị nyefee foto na weghaara vidiyo na iPod Igwefoto Roll ka Mac Mgbe ejikọta gị iPod ka Mac na eriri USB. Dị ka na-ebufe ndị ọzọ faịlụ, music na vidiyo, ị na-enweghị oke ma iji ihe iPod ka Mac transfer software, sị Wondershare TunesGo (Mac). Na ya enyemaka. Ị nwere ike n'otu ntabi nyefee music, photos, music videos, TV na-egosi, olu memo, pọdkastị, iTunes U na audiobook na gị iPod ka Mac.
Ọ bụrụ na ị nwere a Windows PC, ị nwere ike na-atụgharị Wondershare TunesGo (Windows) ịkwaga faịlụ site na iPod ka Mac. N'adịghị ka ndị Mac version, ọ na-enyere ị nyefee music, videos, photos, kọntaktị, SMS, na iMessages ka Windows PC.
Cheta na: TunesGo (Mac) bụ obere dị iche iche si TunesGo (Windows). TunesGo (Mac) anaghị akwado na kọntaktị na SMS ugbu a, ma na-eme ezigbo ọrụ ná ebufe music, videos, photos, audiobooks, olu memos n'etiti ihe iPod aka na a Mac. Wezụga ya, ọ na-ahapụ gị nyefee songs na listi ọkpụkpọ site na iPod nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo ka Mac.
Otú nyefee faịlụ site na iPod ka Mac
Na-ahọrọ nri version nke TunesGo na wụnye ya na gị Mac ma ọ bụ Windows PC. Ebe a, m ga-egosi gị otú ị nyefee iPod faịlụ ka Mac na Mac version. Ugbu a, ka ego ya.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod ka Mac
Na-amalite na, malite TunesGo (Mac) na Mac. Bilie gị iPod jikọọ na Mac na eriri USB. Nke a iPod ka Mac software ga-akpaghị aka ịchọpụta gị iPod na mgbe ahụ na-egosi ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. Copy faịlụ site na iPod ka Mac
Ugbu a, ọ bụ oge na-egosi unu ụzọ nyefee music, videos, foto gị iPod ka Mac otu otu.
Copy music si iPod ka Mac
Ihe kacha mfe idetuo niile music on iPod ka Mac bụ pịa "Iji Mac". Na faịlụ nchọgharị window, na-agagharị gị Mac ịchọta a nchekwa ịzọpụta exported music.
Ma ọ bụ, ị pụrụ ime music transfer n'ụzọ dị otú a. Na-ekpe sidebar, pịa "Music" na-egosi music management window. Lelee songs na ị chọrọ Detuo na Mac. Mgbe ahụ, pịa "Export". Ịnyagharịa ka nchekwa ebe ị na-ekpebi ịzọpụta songs.
Bugharịa vidiyo si na iPod ka Mac
Gaa Movies, TV na-egosi, iTunes U, wdg na ekpe sidebar. Na kwekọrọ ekwekọ window na nri, ịhọrọ videos na pịa "Export". Agagharị gị Mac ka a zọpụta ụzọ na-echekwa bupu videos.
Nyefee foto site na iPod ka Mac
Pịa "Photos" ke sidebar. Nke a na-elu foto management window na nri ebi ndụ. Na nri n'igbe, ị ga-ahụ Igwefoto Roll. Photo Stream na Photo Library. Họrọ otu nchekwa ma ọ bụ album n'okpuru Photo Library. Mgbe ahọrọ foto na ị ga-amasị nyefee gị Mac. Pịa "Export". Mgbe faịlụ Chọgharịa window Pop elu, họrọ a ebe ịzọpụta exported photos.
Ọ bụrụ na ị weghaara ụfọdụ vidio na gị iPod, ị nwekwara ike mbupụ ha gị Mac. Na Video n'okpuru Ndekọ igwefoto Roll. Họrọ gị chọrọ weghaara videos na pịa "Export". N'otu aka ahụ, chọta a nchekwa na-echekwa weghaara videos.
Gbalịa TunesGo (Mac) na-agbalị na-ebufe faịlụ site na iPod ka Mac.
Olee otú iji tọghata YouTube ka WAV Mac (El Capitan gụnyere)
Mgbọ Software: mgbọ FTP Client Mac maka Mac